कपिल शर्माले विवाहको तेस्रो रिसेप्शन पार्टी दिँदै, भारतका प्रधानमन्त्री मोदी पनि सहभागी हुने ! « Onlinetvnepal.com
कपिल शर्माले विवाहको तेस्रो रिसेप्शन पार्टी दिँदै, भारतका प्रधानमन्त्री मोदी पनि सहभागी हुने !
Published : 24 January, 2019 4:07 pm
चर्चीत भारतीय कमेडियन कपिल शर्माले आफ्नो विवाहको तेस्रो रिसेप्शन पार्टी दिने भएका छन् । डिसेम्बर १२/१३ मा कपिल शर्मा र उनकी प्रेमीका गिन्नी चतरथको विवाह भएको थियो । विवाहपछिको पहिलो रिसेप्शन पार्टी अमृतसरमा दिएका कपिलले दोस्रो रिसेप्सन मुम्बइमा दिएका थिए । त्यसपछि उनले तेस्रो रिसेप्सन दिल्लीमा दिने भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ ।
मीडिया रिपोर्ट्सका अनुसार उनको तेस्रो रिसेप्सनमा पार्टीमा उच्च नेता अधिकारीदेखि ब्यूरोक्रेट्ससमेत सहभागी हुने छन् । त्यसतै सोहि पार्टीमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि सामेल हुनसक्ने बताइएका छ ।
कपिल र मोदीबीच राम्रो सम्बन्ध रहेको बताइन्छ । केहि दिन अगाडि उद्घाटन भएको नेसल म्युजियम अफ इन्डियन सिनेमाको समारोहमा प्रधानमन्त्री मोदी र कमेडियन कपिल शर्माबीच भेट भएकाे थियाे ।कपिलले प्रधानमन्त्री माेदीसँगकाे फोटो आफ्नो इन्स्टाग्राममा समेत सेयर गरेका थिए ।